Idozi iTunes Library Music Tags
Nke mbụ niile mkpa ka ị na-emeghe software nke TunesGo nke abụọ pịa ya na akara ngosi na gị PC. A homescreen dị ka nyere n'okpuru ga-ugbu a na-egosi.
Ugbu a na n'aka ekpe menu nke TunesGo peeji, na-aga Music nhọrọ ugbu n'okpuru iTunes Library (nseta ihuenyo egosi red akara igbe)
Nzọụkwụ 3. họrọ "ọcha" - "Idozi Music Tags" ọrụ
Ugbu a na n'elu nke TunesGo ihuenyo click on nhọrọ nke "Hichaa" nke ga-emeghe a dobe ala menu. Site na nke a họrọ nhọrọ nke "Idozi Music Tags".
Nzọụkwụ 4. click "fix" button
Ugbu a, a na ndepụta nke songs ga-apụta na nwere efu ma ọ bụ etịbe mkpado. (Ihuenyo ogbugba egosi 51 dị otú ahụ tracks). Iji idozi ndị a na mkpado, pịa "Idozi" nhọrọ ugbu na nri n'elu n'akụkụ.
Ọzọ: Ọkụ iTunes Music ka CD